Ukutholakala imfundiso yokuziphendukela kwezinto ekuqaleni kwekhulu leminyaka elidlule kuye kwasusa umgoqo abalulekile ekuhloleni imihlola ngokomzimba elihlobene ne ekutadisheni ijubane lokukhanya kanye isikhala-time izenzakalo. Kuze kube manje, kuyaziwa ukuthi le nkolelo-mbono wokuhlobana kwezinto, Einstein hhayi kuphela impumelelo ngokushesha lokhu physics brilliant, kodwa kunalokho uletha ndawonye eziningi eziye zatholwa kulesi sici, izazi zesayensi eziningi, lapho ungase ukwazi khona ukukhetha Laurence kanye Poincaré. I-physics Austrian owaziwa bakwazi kuphela bebambisana izakhi disparate yokwenza lo postulate enkulu, okuyinto kwaba ukuqala indlela entsha ngokuphelele ekutadisheni imihlaba isikhala.
Ngakho imfundiso yokuziphendukela Einstein wokuhlobana kwezinto, kuzwakala kunzima ngempela, futhi uma sikhuluma kalula, theory ngokomzimba okuyinto ubheka izakhiwo spatio-temporal of izinqubo ezenzeka kokubili ezweni emkhathini. Njengoba lezi zinhlelo zincike ngqo ezintweni ezifana yesisindo ensimini futhi ukuthi lingakanani ijubane lokuya sento ngokomzimba, bese-ke ikuvumela ukuba ushayele le kwezinto. Kuye kwaba seqophelweni umbiko sibona isakhiwo isikhathi ehluke ngokuphelele, okuyinto Ungahambisa ohlelweni eyodwa kuya kwenye umbiko lapho ijubane lokukhanya. Ngesikhathi enhliziyweni amalungiselelo ezinkulu ezimbili kukhona theory ka-Einstein ye: i ukuqinisela of ijubane lokukhanya esikhaleni nje, kanye nokulingana zonke inertial izinhlelo umbiko. Lezi axioms ezimbili ziyisisekelo amafomula yoguquko kusukela kusistimu eyodwa inertial kwenye - okuthiwa ejikeni Lorentz kugucuka, okuyinto elamiswa theory ka-Einstein ye kwezinto.
Nokho, muva nje, ososayensi zanamuhla okutholakele ngaphezulu ezokwenza kucekelwe phansi theory abadumile, kancane kancane lalifuna ubufakazi ka falsity yayo. Eminyakeni embalwa edlule, iqembu lososayensi base-Australia, eholwa John. Wobbe, ukutadisha umsuka ukukhanya imithala ekude kakhulu esimisweni sethu sonozungezilanga, wafinyelela esiphethweni sokuthi u-alpha-inombolo akuyona njalo njalo, njengoba namanje kubhekwa e isayensi yesimanje. It kuvela, inani layo ingase yehluke kuye ngesistimu iphuzu emkhathini kusuka kulo Kwenziwa ukubala. Nakuba kuzinga yesayensi, lokhu engakaze kungase kutholakale, kodwa uma lo mbono kuqinisekisiwe, theory ka-Einstein ye kwezinto cishe zihlangene. Ngaphezu kwalokho, njengoba umphumela walokhu okusanda kutholwa wafaka phambili version ukuthi ijubane lokukhanya kungaba futhi ezahlukene, ngokuvamile, bekuyoba engozini Izinkolelo eziyisisekelo physics zanamuhla.
Namuhla, ososayensi baye isondela kakhulu ubufakazi bokuba khona imihlaba okufanayo, lapho string imfundiso yokuziphendukela yonke iqala ukuqoqa ubufakazi ngaphezulu umusa yayo. Futhi lena ngokuphelele emkhakheni embi zokutadisha, nakho namanje eziningi izimfihlakalo ukuthi kudingeka ukuxazulula esintwini yesimanje. Phela, zonke izinto ageleza, izinguquko konke. Esikhundleni okutholakele omunye eze nezinye, esinembile futhi zilungile. Ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili, intuthuko Yokuvukela physics ngaleso sikhathi wenza ithiyori okhethekile wokuhlobana kwezinto of Einstein, owathola uMklomelo KaNobel Emkhakheni ke, nokubonwa emhlabeni wonke. Nokho, Okwamanje, ekukhanyeni walokhu okusanda kutholwa, amadivayisi amasha emkhakheni isayensi yokuma kwezinto ezisemkhathini, okungase Bole ukukhomba imihlola ezithile ezenzeka emkhathini, futhi umphumela waba ukuthi imibono yakudala esikhundleni abasanda kuhlanganyela.
Ngakho, imfundiso yokuziphendukela jikelele wokuhlobana kwezinto, u-Einstein azithola namanje wonke amazwe omhlaba, kodwa ososayensi abaningi emkhakheni imihlaba parallel kakade ezama ngaso sonke isikhathi sincike postulates yayo. Kwazi bani, mhlawumbe sizobe bezobona ukuzalwa umbono mnandi futhi efanele nokuxhumana space kanye nesikhathi ngokusebenzisa iphrizimu ijubane lokukhanya kanye iphuzu umbiko.
Indlela yokwenza lozalo?
Imali ekhokhelwa "Zonke kuhlanganisiwe M" opharetha "MegaFon"
Ulwe ulwandle: incazelo, ukukhahlamezeka kwendawo, zidala nokudoba izindlela